Baarlamaanka Federaalka oo wali ku dhegan Shirkadda FAVORI L.L.C – idalenews.com
Baarlamaanka Federaalka oo wali ku dhegan Shirkadda FAVORI L.L.C
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa Maalintii 2-aad ka dooday Heshiiska ay Shirkadda FAVORI LLC ku maamulayso Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho.
Fadhiga oo ku furmay 170 Xildhibaan, ayaa markii la gaaray dhamaadka ayaa waxaa isagu soo haray Xarunta Golaha Shacabka 80 Xildhibaan wax ka yar, taasi oo keentay in markale dib loo dhigo Dooda, sida uu sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxa’ed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Guddiga Garoomada & Dekedaha ee Baarlamaanka, ayaa soo gudbiyay Mooshinka, balse waxaa hortaagan Caqabado dhowr ah oo hortaagan in COD loo qaado Heshiiska Shirkadda FAVORI LLC ee laga leeyahay dalka Turkiga.
Xildhibaanada Mooshinka keenay, ayaa ku doodaya in Shirkadda FAVORI LLC aysan Sharci ku joojin dalka, gaar ahaan Garoonka Adan Cadde ee Muqdisho maamaada Heshiiska ay la gashay Xukuumadii RW hore Saacid anan la horkeenin Baarlamaanka Soomaaliya.
Heshiiska Maalgashiga dalka, ayaan wali samayn waxaana inta badan dhacda in Shirkado Shisheeye si hoose Heshiis loola galo, taasi oo markii danbe keenta isqab-qabsi ka dhex dhasha Baarlamaanka iyo kuwa Heshiiska saxiixa.
Heshiiska lala galay FAVORI LLC ayaa dhigaya inay Shirkadda maareyso Garoonka muddo 15 Sano ah, iyadoo muddadaas ay ballaarin doonto Dhismaha, dibna u dhisi doonto qeybah kala duwan ay leeyihiin Garoonada Caalamiga ah. Shirkad laga leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo SKA air and logistics ayaa laga wareejiyay Maamulka Garoonka, iyadoo aan dhamaan Heshiikii lala galay oo ahaa 6 Sano laga soo billaabo 2010.
Madaxa shirkadda FAVORI LLC Osman Basay ayaa sheegay in Bisha Juun ee soo socota ay dhamaanayso Howsha Dhismaha Garoonka, isagoo dhanka kale sheegay in Dhaqaalaha kasoo baxa Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegay in 45% ay leedahay dowladda Soomaaliya, halka Shirkaddu ay 55% yeelan doonto inta uu Heshiiska socda.
Shirkadda FAVORI LLC waa Shirkad si gaar ah loo leeyahay oo saldhiggeedu yahay hadda Magaalada Muqdisho, waxaana ay Adeegyada ay qabato ugu waaweyn Adeegga Dayaaradaha, Maamulka iyo Maareynta Garoonka Diyaaradaha Adan Cadde.
Sidoo kale, waxaa Shirkadan maal-gashaday Laba Shirkadood oo Turkish ah, kuwaasoo kala ahCetin Group iyo Kozuva Group, waxaana u shaqeeya illaa 7,000 (Todobo Kun) oo Shaqaale ah, iyadoo Shirkaddu ay ku howlgasho Sannad walba Lacag gaaraysa $170 Million oo Doollar,sida ku xusan Warbixinta loo gudbiyay Baarlamaanka.
DowladdaSoomaaliya waxay ka hashay in ka badan $1.1 Milyan (Hal Milyan & Boqol Kun oo Doolar) oo Dakhli tooska ah ee Garoonka kasoo gala tan iyo markii Shirkadda FAVORI LLC lagu wareejiyay maamulka Garoonka diyaaradaha 15-kii September 2013. Xildhibaanada ayaa ka hor yimid in Shirkad aan laga lahayn dalka ay Maamusho Garoon ama Deked Mudo ka badan 10 Sano, sidoo kalena ay lahaato 50% Dhaqaalaha.
Idale News Online-Muqdish
Raysal wasaaraha oo ka warbixiyay safaradii Marka iyo Qoryooleey